IINDLELA ZOYILO ZEBOHEMIAN -IZIMVO ZOKUHOMBISA EKHAYA - UHLOBO
21 yeeNdlela eziBalaseleyo zeBohemian yoyilo lweKhaya
Unokufumana iinkcazo zesitayile seBohemian kwi-intanethi. Zichazwa njengezithuba ezizaliswe zizityalo ezininzi, imibala, iipateni, iiratt, kunye nezinto. Unokuthatha iikhwizi ezikwi-Intanethi ukubona ukuba isitayile seBohemian senzelwe wena. Kodwa ngelixa zonke ezi zichazi ziyinyani kwezobuchwephesha, ukuhonjiswa kwe-boho bekusoloko kunjalo Ndiyayazi xa ndiyibona uhlobo lwesimbo kum. Ngelixa i-boho ngokuqinisekileyo inokubhekisa kuseto lwezixhobo zoyilo ezixutywe kunye, kum, kuninzi ngakumbi kwenkcazo yamandla anokuvela kwindawo.
Ithetha ntoni i-11 11 pm
Imibala edibeneyo kunye neendwangu ngokushiya. Gcina izityalo ezonwabileyo kwaye usebenzise i-asymmetry ngelixa uhlobisa iindonga xa kunokwenzeka. Thenga iintyatyambo ezintsha. Hlanganisa amakristali enza umnyama kwiifestile. Shiya indawo yomgangatho wokudanisa.
-URachel Kaplan, uHippie, Igumbi leRainbow-Boho e-Oakland
Xa ucinga ngezinto ezibonakalayo kumgangatho wesimbo se-bohemian, ucinga ngezinto ezithambileyo, ezibunjiweyo, kunye namalaphu phantse kuwo wonke umphezulu. Iziqwenga ezilahliweyo ezibonisa ukunxiba kwazo-kwaye zikhangeleka ngathi yinto onokuyisebenzisa-zihlala zidlala indima enkulu ekuhombiseni. Iitayile zejewel kunye nomhlaba ziya kukusonga ngobushushu obubonakalayo. Imidiliya yamagqabi aluhlaza iya kukwenza uzive ngathi ukwindalo.
Into ezinje ngokufanayo kwizimvo zam yeyokuba bajongeke bahlala kuyo. Bayakhuthaza ukuhlala ixesha elide kunye nokuzonwabisa. Uyilo lwabo ludibanisa ukuziva kukhululekile, ukungakhathali, ukungasebenzi.
(Ityala lemifanekiso: UMargaret Wright)
Ngokwenene ndiyakuvuma ukuba ndingomnye wabo babecinga ukuba isitayela se-boho siyakuba kukukhanya epanini. Enye yeendlela zokuphinda zivele ezaziza kuthi cwaka ziphinde zife kwakhona. Kungenxa yokuba ukuba sinyanisekile ngokupheleleyo, kukho icala elimnyama kwi-boho. Yiya ngaphezulu kwaye ikhaya lakho linokunikezela ngexabiso eliphantsi 'i-70s yokuqala yasekholejini vibes.
Kodwa ngenene, kunzima kakhulu ukugqithisa. Esi sitayile sikucela ukuba uye kwi-maximalist ukuya kwi-max. Kodwa ikwisitayile esinokuba sincinci, kwaye sithobele. Ingayifaka umnqwazi wayo kwezinye iindawo, idibane nezinye izitayile, okanye yahluke kancinane, nayo. Iyaxolela xa isiza kuyilo lwasekhaya. Kwaye nangona uyila njani ukuya kwi-boho… amathuba okuba ikhaya lakho liza kujongeka kwaye liziva liphumle.
Inombolo yeengelosi ezingama-333 ezinentsingiselo
21 yezona ndawo zintle zohlobo lwe-bohemian:
2:22 inani leengelosi
Ungayigcina njani iNkuni kwaye unike uBomi obutsha kwiFenitshala endala
Iprojekthi ye-DIY engaphantsi kwama- $ 20 yokongeza isiBheno seCurb
Into eNye abantu bayilibale ukuyicoca xa ushukuma
Amakhaya aKhuthazayo ayi-400ish kuphela iinyawo zesikwere
U-Williams Sonoma kunye no-Scalamandre's New Bedding Collection is a Animal Print Dream
Isofa yokulala ngokuhlwa kwe-DWR
Uya kuba no-Anne Shirley ongakumbi wokubulela ngeeNkwenkwezi eziLungileyo ze-PBS
Le ndawo ihlaziyiweyo eyi-650-Square-Foot-NYC Indlu ihambelana kakuhle neNtsapho yabane
Ungayenza njani i-DIY yeFuton eneStylish ephindaphindayo njengoGcino lweSithuba esincinci
Uyenza njani itafile yeCafile yakho yeKofu ukuze ube nokuSebenzisa
Uyenza njani iNombolo yakho yeNdlu eNeutra
Uyivavanya njani ipeyinti ekhokelayo ekhayeni lakho
Amandla evumba lokukunceda ulale
Isizathu esiSilumko sokuba abanye abantu bafaka ii-Zip Ties kwizibambo zomtshayelo
Iyintoni intsingiselo ye-1111
Ithetha ntoni ingelosi engu-1010
Ndihlala ndibona i-777
zithetha ntoni i-999
yintoni intsingiselo engama-666
1234 kuthetha ukuba ndiyakuthanda